संस्थापक शेयर विक्रीबाट रू. २५ करोड १३ लाख कम पूँजीगत लाभकर असुल | गृहपृष्ठ
Home लगानी संस्थापक शेयर विक्रीबाट रू. २५ करोड १३ लाख कम पूँजीगत लाभकर असुल
on: April 16, 2019 लगानी
संस्थापक शेयर विक्रीबाट रू. २५ करोड १३ लाख कम पूँजीगत लाभकर असुल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संस्थापक शेयर विक्रीबाट २५ करोड १३ लाख कम पूँजीगत लाभकर असुली भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले संस्थापक शेयर विक्रीबाट असुल हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर विक्रीमा परेको फरकपनका कारण कमी आएको देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा ७२ कम्पनीको २ करोड ५५ लाख २० हजार कित्ता संस्थापक शेयर रू. १० अर्ब ६४ करोड १४ लाखमा विक्री भएको छ । उक्त शेयर कारोबार भएको दिनको साधारण शेयरको न्यूनतम मूल्यमा विक्री गर्दा पनि १५ अर्ब ६६ करोड ८७ लाख हुने महालेखाको ठम्याइ छ । यसरी विक्रीमा फरक परेको रू. ५ अर्ब २ करोड ७३ लाख समेतमा पूँजीगत लाभकर गणना गरी असुल गर्नुपर्नेमा रू. २५ करोड १३ लाख कम असुल भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ३७ (१) मा कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग गर्दा प्राप्त आम्दानीभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्च घटी भएकोमा फरक रकम आय मानी गणना गर्ने व्यवस्था छ । संस्थापक शेयरको खरीदविक्री कारोबार हुँदा पूँजीगत लाभकर गणनाका लागि २०६४ साल चैत ५ गतेको अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयले खुद सम्पत्ति सकारात्मक भएको कम्पनीको हकमा गतवर्षको किताबी मूल्यको पाँच गुणा वा साधारण शेयरको बजार मूल्यको ५० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो मूल्य र खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएको कम्पनीको हकमा १८० दिनको औसत बजार मूल्यको ५० प्रतिशत वा कारोबार भएको दिनको बजार मूल्यको ५० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोभन्दा बढी मूल्यमा गणना गर्ने उल्लेख छ । सोही निर्णयको आधारमा लाभकर गणना गरेकाले ५ प्रतिशतका दरले पूँजीगत लाभकर कम असुल भएको महालेखाको भनाइ छ ।
साधारण शेयरको ५० प्रतिशत हुने गरी संस्थापक शेयरको मूल्य कायम गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै सो निर्णय पुनरवलोकन गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।